Zvakanakisa Zvishandiso zveWoocommerce Email Kushambadzira
Muvhuro, October 26, 2020 Muvhuro, October 26, 2020 Sheryl Jones
Woocommerce ndiyo inonyanya kufarirwa uye zvine nharo imwe yeakanakisa eCommerce plugins eWordPress. Iyo yemahara plugin iri nyore uye yakatwasuka kumisikidza uye kushandisa. Pasina mubvunzo nzira yakanakisa yekushandura yako webhusaiti yeWordPress kuita yakazara inoshanda e-commerce chitoro! Nekudaro, kuti uwane uye chengetedza vatengi, iwe unoda zvinopfuura rakasimba eCommerce chitoro. Iwe unoda yakasimba email yekushambadzira nzira munzvimbo yekuchengetedza vatengi uye wovaita iwo
Muvhuro, October 19, 2020 Chitatu, December 23, 2020 Douglas Karr